HCIS – HCIS
HCIS - အထက်တန်းကျောင်းမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကျောင်းသားများ၊၀န်ထမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ HCIS -အထက်တန်းကျောင်းသည်ထူးချွန်ထက်မြက်သည့်ဂုဏ်သတင်းရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ HCIS –အထက်တန်းကျောင်းသည်ခိုင်မာသောပညာရေးဆိုင်ရာများကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည် HCIS - အထက်တန်းကျောင်း၏အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပတ်၀န်းကျင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုမျှဝေကြသည်။ ကျစ်လစ်သောအတန်းငယ်များ၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည့်ဆရာများနှင့်မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများသည်ကျောင်းသားတိုင်း၏ တိုးတက်မှု၊ မေးခွန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ပိုမိုပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများကိုဘဝတလျှောက်လုံးသင်ယူသူများဖြစ်ရန်နှင့်ကျောင်း၊ ရပ်ရွာနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းစိတ်အားထက်သန်စွာပါ၀င်သူများဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးတိုက်တွန်းကြိုးစားသွားပါမည်။
HCISတွင်ကျောင်းသားများကိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေရန်ကျောင်းသားများ၏သင်ယူမှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် နှင့်သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူကေနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကိန်းဘရစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအသုံးပြုပါသည်။ Cambridge သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အခြေခံအုတ်မြစ် ၅ ခုရှိပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း – မတူကွဲပြားသောကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်
သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်း – ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်သည်ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများအားတွေးခေါ်စဉ်းစားသူများဖြစ်စေရန်
အကဲဖြတ်ခြင်း – ကျွန်ုပ်တို့၏အကဲဖြတ်မှုများသည်နက်ရှိုင်းသောဘာသာရပ်ဗဟုသုတနှင့်အယူအဆဆိုင်ရာနားလည်မှုများကို စစ်ဆေးပြီးကျောင်းသားများ၏အတွေးအခေါ်စွမ်းရည်များတိုးတက်စေရန်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်း – ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအလုပ်ရှင်များနှင့်တက္ကသိုလ်များကအသိအမှတ်ပြုရန် ( ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားပြည်တွင်း၌သာမကနိုင်ငံတကာတွင်ပါအရေးပါတန်ဖိုးရှိသည်ဟု ယုံကြည်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ )
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း – ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများအား နိုင်ငံတကာကင်းဘရစ်ကျောင်းများအဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ၀င်စေပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
Gil Cabillon Legaspi
Trevor Andrew Stuart
HCIS- High School အ‌‌ကြောင်း
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောသင်ခန်းစာများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
- ၅၀ -
- ၃၃ -
- ၂၀၀ -
HCIS High School ကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတသော၊ တိုးတက်သောပညာရေးကိုပေးအပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ ဤအချက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသည်ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုများကိုကျင်းပခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများကိုကွဲပြားသည့်များစွာသောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးနှင့်အစီအစဉ်များသည် ၄င်းအချက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးပြက္ခဒိန်ကိုပျော်ရွှင်စိတ်၀င်စားဖွယ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Hanifer Year4 & Junaid Year6၏အမေ
“HCIS သည်ကျောင်းသားများ၏ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ သဘောထား၊ လုပ်ရပ်များကိုမြှင့်တင်ရန်သင်ခန်းစာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ
Snow Year5၏အမေ
“ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျောင်းသားများဖြစ်စေရန်၊ ကောင်းမွန်စွာပြုမူနေထိုင်သောလူတစ် ဦးဖြစ်စေရန်နှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်သင်ယူရန် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသရုပ်ပြနေသော HCIS - အထက်တန်းကျောင်းမှဆရာများနှင့်ကျောင်းအုပ်အား အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ HCIS အစဉ်မပြတ်ပိုပြီးအောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ”
Audrey Year3၏အမေ
“သမီးအတွက်ပထမဆုံးကျောင်းရွေးချယ်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပါတယ်။ ညီမလေးကအသစ်ဖြစ်တဲ့ LCIS ကိုအကြံပေးတယ်။ စိတ်ရှည်တဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့အတူသူ့ကိုကျွန်မအဲဒီမှာစာရင်းပေးခဲ့တယ်။ သူငယ်တန်းမှ ၁ တန်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုအစပိုင်းမှာကျွန်မစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သမီးကစာသင်နှစ်ကိုသူမရဲ့ဆရာများ၏အကူအညီ၊ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သည်။ HCIS ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသည်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးသာမကသူတို့၏ကောင်းကျိုးနှင့်လုံခြုံမှုကိုပါ ဂရုစိုက်တယ်။ မိဘတစ်ဦးအနေဖြင့်သမီးအွန်လိုင်းသင်ယူမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်လည်းစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် HCISမှဆရာများသည် ပညာရှင်ဆန်စွာသင်ကြားနေသောကြောင့် ပြဿနာမရှိခဲ့ပါဘူး။ HCIS မှာအားလုံးအောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။”
နာမည် Please enter your name.
အီးမေးလ် Please enteravalid email address.
ဖုန်းနံပါတ် Please enteravalid phone number.
သင့်စာလွှာ Please type your message.